ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Xingtai Huimao Trading Co. , Ltd.
XINGTAI HUIMAO TRADING CO ။ , LTD သည်ရာဘာပစ္စည်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းမှသည်ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုတင်ပို့သူ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အနားအတော်လေးယှဉ်ပြိုင်မှုရှိပါတယ်
1. နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တင်ပို့မှုအတွေ့အကြုံရှိသည်
ရရှိနိုင်နှစ် ဦး စလုံးအရေအတွက် 5.Small အရေအတွက်နှင့်ပိုကြီးတဲ့အမိန့်အရေအတွက်
6. အလျင်အမြန်ပေးပို့ခြင်း၊ လျင်မြန်သောတုန့်ပြန်မှု၊ အရည်အသွေးမြင့်သည်။ အလိုအလျောက်အပိုပစ္စည်းများကိုအဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိရိယာများပါ ၀ င်သည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်ရုံများမှပြုလုပ်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာများ၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ၊ သိပ္ပံနည်းကျစီမံခန့်ခွဲမှုမှကုန်ပစ္စည်းများသည်အရည်အသွေးမြင့်မားကြောင်းသေချာစေပြီး၊ ကျွမ်းကျင်ပြီးကျွမ်းကျင်သောပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချသူသည်ကုန်သွယ်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးမြင့်မားသည်ကိုသေချာစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န် - အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောပထမ ဦး ဆုံးအကြွေးကျွန်ုပ်တို့သည်ရာဘာအစိတ်အပိုင်းများ (ဆီတံဆိပ်၊ အိုလက်စွပ်၊ အဆို့ရှင်အဖုံး၊ အချောလက်မောင်း)၊ အင်ဂျင်တပ်ဆင်ခြင်း၊ လေစစ်စက်၊ လောင်စာစစ်ထုတ်စက်၊ ရေနံစစ်ထုတ်စက်၊ မီးပွားပလပ်၊ ဘရိတ် pad၊ ဘရိတ်ဖိနပ်၊ အမျိုးအစား ၅၀ ကျော်ပါသောစုပ်ယူခြင်းနှင့်အခြားမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ကားမော်ဒယ်များအတွက် Toyota Honda Nissan BMW VW Audi Mitsubishi Benz KIA Mazda Lexus ဂရိတ် Wall Pickup SUZUKI ISUZU Subaru Hyundai Volvo ... ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှု A.
ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကဘာလဲ။ 1 Western Union2T / T ခ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရေကြောင်းနည်းလမ်းများမှာအဘယ်နည်း
1 Express DHL UPS TNT Fedex (သုံးစွဲသူများအကောင့်တန်ဖိုးထားလေးမြတ်သည်) ။ ခရီးဆုံးကိုရောက်ဖို့ 3/4 ရက်လောက်ကြာတယ်။
၂ လေယာဉ်ဖြင့်ပို့ဆောင်ခြင်း။ ရက်များသို့ရောက်ရန်ရက်ပေါင်း ၄/၆ ကြာသည်။
3 သင်္ဘောနှင့်ပင်လယ်။ (အပြည့်အဝကွန်တိန်နာသို့မဟုတ် drop ရေကြောင်း)
သင်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းမှုကိုစီစဉ်နိုင်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောစျေးနှုန်းများကိုကမ်းလှမ်းသောသင်္ဘောကိုယ်စားလှယ်နှင့်အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုအိမ်တွင်သို့မဟုတ်သင်၏ဒေသခံဆိပ်ကမ်းတွင်ကောက်ယူရုံသာလိုအပ်သည်။ ဂ
စျေးနှုန်းနှင့်ပေးပို့မည့်အချိန်ကားအဘယ်နည်း ၁ လက်လီစျေး (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော PCS ၅၀) ၃ ရက် ၃ ရက် ၂ ရက်လက်ကားစျေး (၅၀ - ၄၉၉ PCS) ၃ ရက် ၃ ရက် ၃ ၃ Mass order order price (အထက်ရှိ PCS ၅၀၀) ၂၅-၃၅ ရက် ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်သည့်အချိန် Others အခြားသူများ ၀ ယ်ယူသူသည် OEM နံပါတ်၊ ကားမော်ဒယ်နှင့်အမှာစာအရေအတွက်ကိုပေးနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့အလွန်တန်ဖိုးထားမည်။ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်နည်းပညာများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက်၏ပေါင်းစပ်လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စားသုံးသူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီးကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးပြင်ပစက်ယန္တရားဖြေရှင်းနည်းများကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖြင့်ပြုလုပ်ပေးသည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်။ ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိဖောက်သည်များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအနာဂတ်ကိုဖန်တီးပါမည်။
နမူနာအော်ဒါ၊ OEM / ODM ထုတ်ယူခြင်း
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအီးမေးလ်သို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်ထံအမြန်ဆုံးပြန်ပို့ပါမည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှကြားနာဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။
အပိုပစ္စည်းများ, အော်တိုဆက်စပ်ပစ္စည်း, ရေနံ groove, ထိန်းချုပ်မှုလက် Bushing, တံဆိပ်ခတ်အပိုင်း, ဆီလီကွန်ရော်ဘာအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်,